Madaxweynaha xaaf oo ugu baaqay shacabka inay Canshuurta bixiyaan.
Star FM February 12, 2018
Madaxweynaha maamulka galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf ayaa sheegay in masuuliyiinta Soomaaliya ku shiray magaalada Muqdisho ay isla qaadeen qorshe balaadhan oo AL-shabaab looga saarayo deeganada ay gacanta ku hayaan sidoo kalena la isugu furayo dhamaan wadooyinka ay goduumiyeen.
Madaxweyne xaaf ayaa shacabka Soomaaliyeed ku booriyay inay la shaqeeyaan dowlada dhexe iyo maamulada Xubnaha ka ah maadaama taageerada shacabku ay muhiim u tahay dhamaan qorsheyaasha dowlada ee ku aadan sugida amaanka iyo hormarada kale ee la hiigsanayo.
Madaxweyna Galmudug ayaa shacabka ugu baaqay inay bixiyaan lacagaha Canshuuraha ah ee dowlada si ay u suura gasho in dalka Soomaaliya laga hirgaliyo xarumo Caafimaad oo dhamaystiran,waxbarasho tayaysan,amnigu la isku halayn karo iyo dhamaan hormarada ay Bulshadu u baahan tahay isagoona intaasi raaciyay in talaabada ugu horaysa ay tahay sidii loo furi lahaa dhamaan deegaanada go’doonsan.
Xoogaga AL- shabaab ee diidan jiritaanka dowlada Soomaaliya ayaa wali gacanta ku haya deegaano badna oo dalka Soomaaliya ka mid ah marar badan ayayna masuuliyiinta dowlada dhexe iyo kuwa maamul goboleedyadu sheegeen inay ka go’an tahay sidii ay AL-shabaab uga saari lahaayeen meelaha ay ku sugan yihiin wallow aan qorshahaas wali lagu guulaysan.
← DHAGEYSO Taliyeyaasha saldhigyada magaalada Muqdisho oo lala xisaabtamayo.
DHAGEYSO Barnaamijka Kulanka Star Dooda Furan 12-02-2018 →